Inonakidza ice cream hachisi chinhu chinoshamwaridzana nevazhinji neGerman. zvisinei, Ballabeni Aizi kirimu ari pano kushandura kuti wayo incredible scoops. Iyi yakatanhamara ice cream parlor ice iri iri muMunich uye ine zvakanyanyisa zvinotevera. Yokumusoro ndekwaJehovha Giorgio Ballabeni, mumwe grandmaster mu unyanzvi rokuita aizikirimu. Akatanga ice cream sekutandadza, uye zvose reMunich anotenda nokuti. vashanyi vakawanda veko rudo muchitoro, kusiya wongororo dzinoshamisa. Kana ukaedza zvavo aizikirimu, hazvina kuoma kuona nei. Vakaita honed basa ravo vakakwana uye tiri mumwe dzakanakisisa mumunda yavo. hasha dzavo anouya kuburikidza zvose Scoop. Rimwezve bhonasi ndechokuti vane zvavo aizikirimu rori uye anogona tigutse zvido voga kumapati!
Unofanira munombosangana uri guru Hungary, nechokwadi kushanyira Gelarto Rosa. Izvi zvinoshamisa aizikirimu chitoro chiri moyo Budapest. Vose vari nezvechivanhu, kudyidzana, rudo, uye chido, riri kuoneka pabasa ravo. Nemamwe mashoko, vari nyanzvi vechokwadi mumunda. Kusvikira avo aizikirimu, uchafara kunzwa kuti vanoshandisa chete eitsvo Organic pakugadzira. Dzose huru aizikirimu chitoro haambotauri chakagadzirwa aizikirimu. zvisinei, chii chinoita Gelarto Rosa nedzimwe mhizha dzavo nzira kuumba aizikirimu kupinda ruva. Kana iwe wakambove muSzent Istvan Chikwere panguva inopisa zuva, iwe uchave nechokwadi chekuona vanhu vazhinji vane maruva-akafanana echando makirimu vanofamba-famba.
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe